I-Mamma Mia isikhungo sedolobha laseVilamoura - I-Airbnb
I-Mamma Mia isikhungo sedolobha laseVilamoura
I-Mamma Mia Apartment imaphakathi nedolobha laseVilamoura, etholakala emizuzwini emi-2 ngokuhamba ngezinyawo usuka kuzo zonke izindawo zokudlela, i-Marina, imigoqo kanye nolwandle. igumbi elifakwe ikhishi. Ifulethi lingahlala abantu abangu-6. Amakamelo okulala ama-2 anegumbi lokugezela nendlu yangasese. Nelinye ithoyilethi elisendlini yokuphumula. I-balcony ebheke endaweni ephilayo ivumela ukuthi ukwazi ukudla ngaphandle. Indawo yokupaka iyatholakala.
Ifulethi lonke selilungisiwe, linokukhanya okuningi futhi lijabulisa ngamaholide amahle.
amashawa abanzi futhi amnandi, wonke amagumbi ane-balcony. amakamelo amabili azuza kumabonakude nge-netflix .. ikhishi lihlome ngokugcwele .. futhi unomshini wokuwasha endlini yangasese yegumbi lokuphumula .. indlu itholakala enkabeni yedolobha .. awudingi ukuqasha imoto uma uthenga, ukuhamba e-marina noma ogwini ..
IVilamoura iyindawo engahlanganisiwe e-Algarve, ogwini oluseningizimu yePortugal. Ingelinye lamakhona amathathu e-Algarve's Golden Triangle. I-Vilamoura ihlanganisa enye yezakhiwo ezinkulu zezivakashi eyodwa eYurophu futhi enomhlaba ongamahektha angaba ngu-2,000. Isikhumulo sezindiza esiseduze sise-Faro.
I-Vilamoura iyindawo yamaholide yesimanje futhi eyinkimbinkimbi etholakala kwelinye lamabhishi amahle kakhulu enkabeni ye-Algarve.
Ekuqaleni, iVilamoura yakhiwa ngeminyaka yawo-1980 njengendawo yokudlala igalofu esezingeni eliphezulu, futhi namuhla inamabala egalofu amahlanu akhethekile, kanye nezindawo zezivakashi ezihamba phambili. Enkabeni ye-Vilamoura kukhona inkimbinkimbi ye-marina ekhethekile, lapho ama-yachts ayizigidi zamarandi ahamba khona, futhi izivakashi zingadla ezindaweni zokudlela eziphambili noma zihlanganyele ezindaweni zobumnandi.
Amabhishi aseVilamoura mahle, anezihlabathi zegolide ezithambile namanzi olwandle acwebile njengekristalu aphephile emindenini, kuyilapho imidlalo yasemanzini enenjini (ijet skis, izikebhe zikabhanana kanye ne-parasailing) izojabulisa "izingane" zabo bonke ubudala. Isifunda esimaphakathi se-Algarve silungele izingane ezindala kanye nentsha, ezokhothamela i-"Zoomarine" noma amapaki amanzi e- "Aquashow" kanye ne "Slide and Splash".
I-Vilamoura ingenza futhi uhambo lwamasiko; eduze nedolobha elingokomlando lase-Faro, idolobha lezimakethe laseLoule noma ikota yakudala ebukekayo e-Albufeira.
Kafushane, ngeke ushodelwe izinto ongazenza ngesikhathi seholide lakho e-Vilamoura.
Ngihlala ngitholakala ukuze ngisize abaqashi bami futhi ngibavumele ukuthi basebenzise eyodwa. ukuhlala okujabulisayo okungenakucindezeleka .. ungangifonela noma ungithumelele umlayezo. ngizokuphendula ngokushesha.
Inombolo yepholisi: 97640/AL